Chii chinoshandisa gore komputa uye chingakubatsira sei mukutengesa kwako kwemagetsi? | ECommerce nhau
Chii chinoshandisa gore komputa uye chingakubatsira sei mukutengesa kwako kwemagetsi?
Jose Ignacio | | Cloud computing, CMS uye Technology, eCommerce
Hapana munhu anofungidzira kuti kusimuka kwe e-commerce kwakabatana zvakanyanya nekukura kwehunyanzvi hutsva kuburikidza nahwo hunogona kushanduka, senge gore komputa. Zvakanaka, iyi inyanzvi sisitimu inoita kuti zvikwanise kushanda nayo yakaiswa software mugore, pasina kutora chero chinhu kukombuta uye nekukwanisa kuwana ruzivo rwedu rwose zvisinei nekwatiri.
Naizvozvo, itekinoroji huru inopa akawanda mabhenefiti kune e-commerce zvese kupa sevhisi iri nani kune vatengi vayo uye kuwana pundutso yakawanda kumabhizinesi mitsara inosanganisirwa mune aya maitiro masevhisi ari kuenda kunoratidza maitiro echikamu. mune ramangwana risiri kure zvakanyanya munguva. Kusvika padanho rekuti kune akawanda uye akawanda zvitoro zvepamhepo zvinosangana neizvi tekinoroji parameter.
Hazvishamise kuti panguva ino nyanzvi dzakasiyana dzinoverenga kuti kubata e-commerce kuburikidza nesystem, senge mune ino iri compute yegore, avhareji yekuponesa ye30% zvine chekuita nemamwe matanho ehunyanzvi. Kusvika padanho rekuti ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kukosha dzekuchengetedza panguva ino. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti imwe yemipiro yayo yakakosha iri muchokwadi chekuti ino tekinoroji system inobvumidza kuwedzera zviwanikwa zvemakambani edhijitari zvichienderana nezvinodiwa zvavo chaivo mukuvatonga.
1 Izvo zvakanakira gore komputa
2 Ivo vanogadzira chengetedzo huru
3 Inopa chivakwa chakasimba
4 Natsiridza basa chinhu
Izvo zvakanakira gore komputa
Usati waenderera mberi, yeuka kuti gore komputa rakagadziriswa segore komputa, inozivikanwawo seyemasevhisi. gore komputa gore, komputa gore, zano gore, kana kungori pachena. Ndokunge, mukuzviitira zvinoreva kuti zvinouya kuzopa masevhisi emakomputa kuburikidza nenetiweki, ino mune iyi kesi inouya kubva paInternet. Semhedzisiro yeichi chiito chitsva, pakupedzisira mabhenefiti anobva kuzviito zvakasiyana zvatiri kuzokuratidza pazasi.
Imwe yeakanyanya kukosha inouya kubva kuchikonzero chekuti iwe unozochengetedza imwe mari pane izvo rako bhizinesi redhijitori rinokudhara iwe. Mupfungwa yekuti zano iri mukutungamira kwebasa rako rehunyanzvi, kubva zvino zvichienda mberi, riine chinongedzo chiri kure chinokubvumira kudzikisa mutengo mukutsigira, zvivakwa uye Hardware. Izvi mukuita zvinoreva zvinoreva kuti ichave iri sisitimu inowoneka nyore kune ese madiki kana anowanikwa makambani e-commerce uye nemabhurandi makuru.
Kune rimwe divi, usakahadzika kuti kushanda neyegumi chikuva chee-commerce zvakare kunobatsira kudzikisa mari yekuchengetedza. Izvi zvinopa vanamuzvinabhizimusi muchikamu ichi mukana wekushandisa zvishoma kushandira kwevanhu uye kwemari pahunyanzvi uye kutarisa pazvinhu zvinowedzera bhizinesi ravo, sekushambadzira kana SEO. Nenyaya yekuwedzera iyo ivo vachakwanisa kuchengeta ruzivo rwako mune imwe nzira inobatsira uye yakakwana kupfuura nguva ino chaiyo isati yasvika. Kusvika padanho rekuti chichava chitsva chitsva icho chichava nacho uye icho chaive chisina kusvika parizvino.
Ivo vanogadzira chengetedzo huru
Imwe yezvipo zvakakosha mu Cloud computing ye eCommerce ndeyekuti inotorwa kubva kune yayo chengetedzo, kubva kune ese maonero maonero uye izvo zvinogona kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako kubva kune yehunyanzvi maonero ekuona. Iwe haugone kukanganwa kuti kuchengetedza iyo data mune chaiyo zvivakwa inogonesa iyo webhu kuti igare ichishanda uye inobatsira kudzikisa njodzi dzinotorwa kubva mukuparara, kuba kana cyberattacks, pakati pezvimwe zvinozivikanwa. Nekuti zvirokwazvo iyo sisitimu inonzi gore komputa yakakosha kwazvo kudzivirira kuti kurasikirwa kana kubiwa kwevatengi dhata kunogona kuunza akawanda matambudziko epamutemo uye ehurongwa. Kune iyo poindi iri kuitira kuti igone kana kupa yakaipa mufananidzo wekambani yako brand uye inokuvadza yako hunyanzvi zvido mukati mechikamu chauri iwe.
Imwe yemhedzisiro yemhedzisiro iyi ndeyekuti mukufamba kwenguva kuchave nekuderedzwa kwehuwandu hwekutengesa kwezvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvaunotengesa panguva iyoyo. Uye ichi ndicho chinhu chakaipisisa chinogona kuitika kwauri kana iwe uchida kufambira mberi mukati meunyanzvi hwako basa nekuti zvinogona kutokuita kuti urege bhizimusi kana kugovera nechikamu chetsigiro iwe chawakagonesa manejimendi ayo nekuchengetwa kwayo.
Chimwe chinhu chekufunga nezvacho chakabatana neicho icho chinokutendera iwe kubata rako repamhepo bhizimusi nekuwedzera kuchinjika kupfuura pakutanga. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti iyi yakasarudzika system inogona kudzorwa kubva zvino zvichienda mberi uye nemashandisi ari nyore kushandisa. Zviri nyore kushandisa uye zviri nani: haina mhedzisiro kana kupesana mukuchengetedza kwayo. Ndeipi nzira iri nani yekusimudzira bhizinesi rako?
Inopa chivakwa chakasimba
Pasina kukosha chakakosha ndechekuti sisitimu yakaumbirwa segore komputa iri kuzoburitsa mimwe mipiro yawanga usina panguva ino. Nekuti mukuita, inogona kunyange kukubatsira kunatsiridza nharaunda uye yakanaka nharaunda yezvakatipoteredza. Izvi zvinogoneka sezvo kuchengetedza mumagetsi kushandiswa mune dzimwe nguva kunogona kufungidzira kusvika pakuderedzwa kweanopfuura 70% pamwe nezvakanakira izvo zvinofungidzirwa nezve nharaunda.
Uye zvakare, inofanirwa kusimbiswa kuti ino sisitimu inobatsira kwazvo kuvimbisa kubudirira kwemabasa ako. Kune chimwe chinhu chiri nyore kwazvo kuti munhu wese anzwisise sezvo paine gore rinopa makomputa vanopa saizi dzese, zvinoreva nzira dzakasiyana siyana dzaunogona kuenda chero nguva muhupenyu hwechitoro chako kana bhizimusi repamhepo. Usakanganwa izvi zvinokurudzira nekuti ndizvo zvichave zvinokurudzira iwe kusendamira kune ino manejimendi modhi mune yako kambani kubva zvino zvichienda mberi.
Nepo kune rimwe divi, iwe zvakare unofanirwa kukoshesa icho chakanakira chakavanzika chegore rakavanzika ndiko kuvanzika kwainopa, zvichikonzera munzvimbo dzakanyanya kusarudzika uye dzisina kugoverwa, sezvinoitika neRuzhinji Ruzhinji. Mune izvo zvinoita musiyano wakajeka pakati pechakavanzika uye zvakavanzika gore. Uye icho chinofanira kuve chimwe chinhu chekufunga nezvacho maererano nekudzimwa kwayo nevashandisi veadhijitari. Hazvishamisi kuti zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa dzekuvandudza zvigadzirwa zvemagetsi kubva kune yakanyanya kukwikwidza zano kupfuura usati wazviita.
Natsiridza basa chinhu
Gore, kune rimwe divi, rinotsigira vashandi vari kure nekutendera vashandi vazhinji kuti vashande kubva kumba, kufamba kana kuenda kumisangano kure nehofisi. Ndokunge, pasina kana kurasikirwa nehukama kana hukama pakati penhengo dzeguta revanhu mukati mezvinhu zvemagetsi zvitoro kana mabhizinesi. Iwe unongoda izvo zvishoma zvinodiwa zvinowanika kune vese vashandisi: desktop desktop, Smartphone kana Tablet, pakati pezvakakosha zvigadzirwa zvehunyanzvi.
Tiri kune rimwe divi, isu tinofanirwa zvakare kusimbisa chokwadi chekuti kuwanikwa kwekubatana kuri kure kunogona kuwedzera kugadzirwa pakati pevashandi mukirasi ino yemakambani eInternet. Nekuti inovatendera kuti vaite mabasa avo kubva chero kwavanoenda munyika. Iko hakuna miganho uye ichi ichokwadi chinofanirwa kuziviswa kubva zvino zvichienda mberi.
Ndokunge, ino system yauya kuzoshandura nyika kana chikamu chebasa sezvo mashoma mafomati akagadzira. Kuti ugone kushanda wakasununguka uchibva kumba, pazororo kana chero imwe nzvimbo yauri kuenda. Uku ndiko kumwe kwekufambira mberi kukuru kwakagadzirwa kubva muchirongwa chinonzi cloud computing ecommerce. Neimwe nhevedzano yezvipo uye mabhenefiti atinozokufumura pazasi:
Iko kune redirection yekutenga ivo pachavo uye uku ndiko kuchinja kukuru zvakanyanya zvichienzaniswa nemamwe mamodheru mune manejimendi manejimendi. Yakanyanya kukodzera kumabasa ehunyanzvi ehunhu hwe digital.
Kuchengetedzwa kwemuchina chaiwo mugore, pamwe nekuchengetedzwa kwedata uye izvo zvinokanganisa purofiti yakakura mubhizinesi rehunhu uhu. Kunyangwe iwo ari maitiro ayo achiri kubuda muchikamu, pasina kunyatso kusimbiswa.
Iyo computing zvivakwa chikamu chakakosha kwazvo chebasa uye inogona kuve imwe yeanonyanya kuita masevhisi ayo madiki uye epakati-epakati emabhizimusi mune ino chikamu anogona kugamuchira uye kubatanidzwa mu e-commerce gore komputa.
Zvinogona kureva shanduko yekubata mu e-commerce modhi uye kuti vashandisi vanogona kuzvibvunza ivo nezvehukama huri mukati mekambani pamusoro peInternet. Mupfungwa iyi, iwo mukana wakawanda kupfuura dambudziko uye nekudaro unofanirwa kuutambira kubva ikozvino. Nekuti iri shure kwezvimwe zvakakosha zvezvinangwa zvaro. Usakanganwa izvi zvinokurudzira nekuti ndizvo zvichave zvinokukurudzira kuti utendamire kune ino modhi yemanagement
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Chii chinoshandisa gore komputa uye chingakubatsira sei mukutengesa kwako kwemagetsi?
Kushandiswa kweecommerce mune yemitambo chikamu
Maitiro ekushandisa zvemagetsi zvekutengeserana mune mamwe masocial network?